Iyintoni i-Story Theater?
I-Story Theater yiyona ntetho ephawulekayo yecala elilodwa okanye ngaphezulu elichazwe liqela labadlali abadlala indima eqela kunye nokubonelela ngeengxelo. Kubonakala ngokusetyenziswa kwezinto eziqhelekileyo ezifana nezihlalo kunye neetafile ezilungiselelwe ukubonisa izicwangciso ezahlukeneyo, iipropati ezilula ezifana nezikhwama okanye iibhabhi zekhadibhodi ezisetyenziswe ngezindlela ezahlukeneyo kwiibali ezingaphezulu kweyodwa, kunye neengubo zokugqoka ezifana neefoloni, iziglasi, okanye i-hat. Umculo uphinde uvame ukubandakanywa kwimiboniso yeeNdaba zeTheatre.
Emuva ngawo-1960, indoda egama linguPaul Sills yasebenza kunye neqela labadlali kwaye yasebenzisa iindlela zobugcisa zokuhlaziya ezidalwe kwaye zibhalwe ngumama wakhe, uViola Spolin (Ukuphuculwa kwe-Theater) ukufanisa iindidi ze-Grimm's Fairy Tales ne-Aesop's Fables. UMnu Sills wabhala umsebenzi wabo waza wabhala kwisidlala esibizwa ngokuba, ngokulula, i- Story Theater. (Ukufunda inkcazo ecacileyo yalo mdlalo, nqakraza apha.)
Lo mdlalo, owawunokuSasazwa ngowe-1970-1971, ngumzekelo omhle wobugcisa bokudala, obulula ukuvelisa, obonwabo. Nantsi indlela yokuyiqonda (kwaye mhlawumbi ulungelelanise amabali akhoyo ekhoyo) Iqonga leNkundla:
Iindibano zeeNkundla zeeNkundla
Kwibala le midlalo, inendibano iyamkeleka phakathi kwabantu abadlala. Ngezantsi kunamanani amacandelo, okanye iindibano, ezisetyenziswe kwiNkundla yeTheatre.
Iinkqubo ezilula ezisetyenziselwa kwiNdlela zokuLungisa ezininzi
Ngokuqhelekileyo zizinto ezimbalwa ezisezantsi. Iipropati ezifanayo zingasetyenziswa ngeendlela ezahlukeneyo kumabali angaphezu kweyodwa.
Ingqungquthela enkulu yelinen, umzekelo, inokuba yindoda kwelinye ibali, umbhoxo olandelayo, umlambo olandelayo, kunye nenyoka elandelayo. Eminye imizekelo yeeprogram ezenziwayo zenzeke ngeendlela ezisebenzisayo kwaye ziphendukele kubo: iimboli ezenziwe ngamatye, i-pool, "i-noodle," iiflebhu, iplank, iindophi, izitya, neebhola.
Iimitha zingabelwa izithethi ngabanye, zibini, amaqela amancinci, okanye i-cast cast. Ukunxibelelana kudlala inxaxheba enkulu kwiiNdaba zeMidlalo yeeTheatre, kodwa akukho mlandisi ochaziweyo. Kunoko, abalinganiswa balandisa izenzo zabo baze bathethe imizila yabo yencoko.
Umzekelo, umdlali odlala i-Goldilocks unokuba nalo mgca:
"Emva koko iGoldilocks yanambitha i-porridge kwisitya esikhulu. Le porridge ishushu kakhulu! "
Omnye umdlali angadlala indima emininzi. Amantombazana angadlala abalinganiswa besilisa, kwaye amadoda angadlala amabhinqa. Abadlali bangadlala izilwanyana. Utshintsho olulula kwizwi, ukunyameka, ukunyakaza, kunye neendleko zokuhamba ngeendleko kubaphulaphuli ukuba umdlali odlala, umzekelo, uMfama kwelinye ibali ngoku nguNkosana kwibali elitsha.
I-Story Theatre "indawo ebonakalayo" ilula: amabhokisi enkuni, izitulo, iibhentshi, iitheyibhile, okanye amanqanaba. Kulo lonke usebenze, ezi ziqwenga zihanjiswe ngokukhawuleza ukubonisa inani lezicwangciso ezahlukeneyo. Ngelixa abaphulaphuli bebukele, abadlali balungiselela izicwangciso eziza kwenziwa: umzila, umqolomba, intaba, isikhephe, ihashe, ibhuloho, okanye itrone, njl njl.
Izambatho ezisisiseko ngokuqhelekileyo azihambisani nombala kunye nesitayela. Abalingisi babonisa utshintsho lomlinganiso ngokufaka isambatho sokugqoka njengengubo, isapeji, ingubo, i-apron, i-wig, impumlo kunye neziglasi, iiglavu, i-shawl, i-blanket, i-bandanna, isithsaba, okanye uboya ingubo.
Abadlali basebenzisa i-pantomime ukulandelelana ngamabali-nangona xa into ebonakalayo ibonakala. Ngokomzekelo, umenzi omnye unokuthi aqhube i-whimp ngenkathi omnye umenzi, ehlangothini, empeleni eqhekeza umbetho wangempela okanye enze isandi sokubetha ukuvelisa isandi somsindo.
Iphosa livelisa imiphumo yesandi ngokujonga ngokupheleleyo kwabaphulaphuli, ukusebenzisa imilomo okanye izandla, okanye izixhobo ezinjengeengqungquthela, ikhwelo, iingoma, kunye nezoos. Zenza izandi ezifana:
Iinkomo ezihlala kuyo, iindudumo, umbane, imvula, umoya, izandi zomsuku, iikhilikithi, iingcango zokugubha, iifenki zehashe kunye namaqabunga, amaqabunga olwandle, ama-seagull, abonkqonkqoza emnyango, isango lokuqhayisa, okanye umoya oqinileyo.
Ukwenza iStyl e
Le fom yefesater ngokuvamile idinga amandla amakhulu, ukunyaniseka. Yonke inkampani yabalingisi isoloko ihlala eqhubekayo ekusebenzeni, edlala indima, iingoma zokucula, izicwangciso ezihambayo, ukwenza iziphumo ezivakalayo, nokuphendula kwiziganeko zamabali adlale njengokuba kwenzeka.
Ngenxa yobuninzi beempawu kwiibali zamabali, iimveliso ze-Story Theatre ziyakwazi ukufumana amanqaku amakhulu abalingisi okanye abancinci abancinci, abathi, njengokuba kuchazwe ngaphambili, badlala indima emininzi. Ootitshala bee-theatre kunye nootitshala beklasini bangasebenzisa iindibano ze-Story Theatre njengeendlela zokuba abafundi baguqule itekisi abayifunayo kwimifanekiso.
Ukubukela inxalenye yeMveliso yeeMidlalo zeeMidlalo, nqakraza apha.
Ukutyelela kwiwebhsayithi eyinikezelwe kumsebenzi kaPaul Sills noVuola Spolin, nqakraza apha.